काठमाडाैंमा पानी परे पाेखरामा छाता ओड्नुपर्ने? : प्रमुख सचेतक अधिकारी - हिमाल दैनिक
काठमाडाैंमा पानी परे पाेखरामा छाता ओड्नुपर्ने? : प्रमुख सचेतक अधिकारी
पोखरा २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:०२
गण्डकी प्रदेशका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले केन्द्र सरकारको रिस गण्डकी सरकारलाई फेर्नु गलत रहेको बताएका छन् ।
बिहिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा प्रमुख चेतक अधिकारीले केन्द्र सरकारको रिस प्रदेश सरकारमा पोखेर सरकार ढाल्नु गलत रहेको बताएका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘केपी ओलीलाई गाली गर्न पर्‍याे भने पृथ्वी सुब्बाले गरेका राम्रा कामकाे विराेध गर्ने ? काठमाडाैंमा पानी परे पाेखरामा छाता ओड्नुपर्ने ? यस्ताे पनि हुन्छ?’
उनले जनताको म्याण्डेटको कदर नगर्दै माओवादी अप्राकृतिक गठबन्धनका तयार भएको आरोप लगाउदै निषेधकाे राजनीति धेरै समय नटिक्ने समेत बताए।
उनले विराेधका लागि मात्र प्रदेश सरकारको विराेध गरिएकाे आरोप लगाए । कोभिडको बेला सत्ताको खेलमा लाग्नु दुखद रहेको बताउदै उनले भने, ‘पहिला जनता बचाउने कि ? मुख्यमन्त्री फेर्ने खेल खेलिरहने ?’
अघिल्लोओलीकै शैलीमा मुख्यमन्त्री गुरुङको धम्की
पछिल्लोजनमोर्चाकी सांसद थापा भन्छिन्: आफैं काम बिगार्ने अनि यहाँ आएर रोकइकराइ गर्ने?